BBC Somali - Cayaaraha - Cayaaraha English Premier League
Abdirisak Mohamed Sirad
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Agoosto, 2012, 16:11 GMT 19:11 SGA
Robin Van Persie oo shaarkii uun bedeshay
Shaadhka uun baa is beddelaye Robin van Persie waxa uu ahaa ninkii awelba ku xaragoon jirey kubadda cagta markii uu gool la yaable uu u dhaliyey Manchester United iyaga oo ku badiyey 3-2 markii garoonka kooxda ee Old Traffod ay kula ciyaareen Fulham sabtidii.
Eden Hazard oo Chesea ay soo iibsatey dhawaan ayaa rigoori u dhaliyey iyaga oo kaga badiyey 2-0 kooxda Newcastle.
Everton waxa ku tumeen 3-1 kooxda Aston Villa garoonka AV oo calankoodu jiifey dhawaanahan markii toddobaadkii horena Everton ay Man U kaga badisay 1-0.
Liverpool waxa ay barbaro la noqotey Man City 2-2 inkasta oo cayaarta badideeda ay gacanta sare lahaayeen.
Cayaarihii kale ee Premier-ka England ka dhacey toddobaadkan waxa ay ku dhammaadeen sidan:
Sunderland iyo Reading dib ayaa loo dhigey
Tottenhan 1 W B A 1